Weerar Saraakiil Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Weerar Saraakiil Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
Warar qorsheysan oo kamiin ah ayeey ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ka fuliyeen xaafadda Suuqa Xoolaha ee degmada Huriwaa ee Muqdisho,waxeyna kamiinkan u dhigeen kolanyo ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada.
Goob joogayaal ayaa sheegay in iska hor’imaad xooggan uu ka dhacay halka loo yaqaan Dalcadda Maalin Taajir ee xaafadda Suuqa Xoolaha, weerarka ayaa lagu beegsaday gaari NOHA ah oo ay wateen mas’uuliyiin katirsan maamulka degmada Huriwaa.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in weerarka lagu dilay laba sarkaal iyo ciidamo ilaala u ahaa, saraakiisha ladilay waxaa kamid ahaa Nin lagu magacaabi jiray Cabdi Geedi Farayare iyo sarkaal kale oo canshuur qaadista qaabilsanaa.
Gaariga weerarka lagu beegsaday ayaa ku gubanaya wadada laamiga ah gaar ahaan inta udhaxeysa isgoyska SOS iyo dhismaha Shirkadda (S company).
Xarakada Al Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas’uuliyadda weerarkan sida ay baahisay idaacadda Andalus ee Afka Xarakada ku hadasha, tan iyo bilashadii Bisha Ramadaan ayay sare usii kacayeen weerarada ka dhanka ah saraakiisha dowladda ee ka dhacaya degmooyinka gobolka Banaadir.